Xoxa roulette ingxoxo yevidiyo
Ungasebenzisa imakrofoni ngqo.
- okwesibili: ukuba khona kwekhamera yewebhu (noma, kubantu abavamile - ikhamera yevidiyo), esetshenziselwa ukwamukela nokudlulisa izithombe, ngendlela yokugeleza okucacile;
- okwesithathu: isikhala somuntu siqu, futhi nokulangazelela ukuba nezikhathi ezinhle zokuzilibazisa kwakho!
Akusabisi uma ungenayo, ngoba ngeke kube nzima ukukwenza ngokuthayipha umbhalo kusuka kukhibhodi usebenzisa ukusakaza okunamandla. Yeka indlela okuhlekisa ngayo ukukhuluma engxoxweni yevidiyo, ukuthumela izincwadi zothando ngaphandle kokuphazamisa ukusakazwa kwevidiyo.
I-roulette yengxoxo - njengenye yezindlela zezindaba ezidlulayo
Ingxoxo yevidiyo yeRoulette namantombazane eminyakeni eyi-18 eyedlule yathathwa njengokungajwayelekile. Njengoba yayingekho ikhamera yewebhu, imakrofoni ekhompyutheni ... Kuvunyelwe ngokushesha ukuqhubeka nenkhulumomphendvulwano ngendlela efiswa ngayo. Ngemuva kokuveza intshisekelo ku-athikili - umlando omncane. "Rulet" videochat - igama selivame kakhulu manje, kepha ngabe uke wacabanga ngomlando wemvelaphi yalelo gama? Incazelo ichazwa ngesakhiwo sakhe esikhululekile, nesingavamile somsebenzi: inhlanganisela yamakhono yenziwa njengasemdlalweni ojwayelekile wezinombolo ezifanayo. Okungaqondakali, kepha kwesinye isikhathi okungalindelekile. Umphikisi ukhethwa ngokuzenzekelayo ngohlelo, uxhuma ku-interlocutor okungahleliwe. Ukuvula umcabango wakho - yizwa le njabulo nomuntu wakwelinye izwe ovela kwenye inkabazwe, uqonde umehluko ebangeni - mhlawumbe ukwizwekazi elikhona.Nosayizi wamehlo amakhulu - ukubona umakhelwane noma isihlobo esikrinini ... Ihlaya alifani futhi lilingana nokuhlukahluka okungu-1: 100,000 kokuthuthukiswa kwemicimbi. Ngenxa yokwehluka kwayo, ibizwa ngokuthi "okungahleliwe". Ngokubanzi - unenhlanhla kangakanani, kwezinye izici, njengomdlalo wenhlanhla wakudala. Ukhathele le ngxoxo - qala ukufuna elandelayo ye-twitter, uma ungayithandi - cindezela usesho futhi uze uthole okufunayo. Ukuhamba okuqhubekayo kanye nenqubo kuyakhanga, imvamisa awukwazi ukuzikhumula. Uhlobo lomdlalo, umlutha futhi olujabulisayo. Kungokwemvelo ukulahla isikhathi, ukuthi ukuzilibazisa kudlula ngokushesha kangakanani. Ufuna isisetshenziswa lapho ungakhona khona esimeni sothando usebenzisa okulula - "iphrojekthi yobuhlobo obuvamile" - yakho. Ingxoxo yamazwe omhlaba yinto ethandwa ngendlela emangalisayo, enemvamisa eyandisiwe eminyakeni yamuva. Yenza ukujwayelana nomuntu,ukuhlala okuphambene nephuzu lomhlaba - manje iqiniso, ukudlala ngothando okulula noma ubungani - kungatholakala ngokubonga kokuxhumana kwamazwe omhlaba. An ongenakulibaleka, ngokomzwelo, nokuhlangenwe nakho kwengqondo ngobuzwe obuhlukile, ungazizwa, ukhumbule impilo yakho yonke. Ukuzijwayeza nabantu bokufika ngeke kumoshe. Ukuvela okucacile kuzoshiya uphawu olungacimeki. Kwabaningi kuzoba nenkinga engenakunqotshwa - ulimi lwesikhulumi. Kukhona ama-polyglots ambalwa futhi kunzima kakhulu ukwazi kahle ulimi lwamanye amazwe omhlaba. Ukuthola umuntu ozokhuluma naye kuyindaba yemizuzwana emi-2, kepha ukuqonda ukuthi uthini sekuvele kuyinkinga ... Kuyadingeka ukuthi kufanele uzichaze futhi uzichaze. Abathandi bezilimi zakwamanye amazwe bazothokoziswa ngomkhuba ongenakuguqulwa, kufanele uvume. Yebo, okwamanje, ake sibuyele empandeni - inqwaba enkulu ifuna okuhlukahlukene engxoxweni, hhayi ukuthuthukisa ulwazi lwayo ...kungcono ukusebenzisa ulwazi lwegama lesiRashiya lomdabu futhi eliyintandokazi. Ingxoxo yevidiyo yanamuhla yaseRussia yenzelwe izethameli ezihlosiwe. Iwebhusayithi efinyeleleka eyenzelwe ukuqonda izokwenza ukuthi kube lula ukuthola umuntu osebenzise ulimi olufanayo enkulumweni evamile njengawe. Ngokwemvelo, kulokhu, izingxoxo naye zizoqhubeka ngaphandle kwezithiyo. Ukuqondana ngokujwayelana okusha okuthembisayo, isikhathi esihle esichithwe, izihloko ezahlukahlukene - ngeke kukuvumele ukuthi ube nesithukuthezi engxoxweni oyithandayo yevidiyo, kepha kuzoletha injabulo, ukukhululeka ozokukhumbula uma ukude noxhumano lwe-Intanethi.Ngokwemvelo, kulokhu, izingxoxo naye zizoqhubeka ngaphandle kwezithiyo. Ukuqondana ngokujwayelana okusha okuthembisayo, isikhathi esihle esichithwe, izihloko ezahlukahlukene - ngeke kukuvumele ukuthi ube nesithukuthezi engxoxweni oyithandayo yevidiyo, kepha kuzoletha injabulo, ukukhululeka ozokukhumbula uma ukude noxhumano lwe-Intanethi.Ngokwemvelo, kulokhu, izingxoxo naye zizoqhubeka ngaphandle kwezithiyo. Ukuqondana ngokujwayelana okusha okuthembisayo, isikhathi esihle esichithwe, izihloko ezahlukahlukene - ngeke kukuvumele ukuthi ube nesithukuthezi engxoxweni oyithandayo yevidiyo, kepha kuzoletha injabulo, ukukhululeka ozokukhumbula uma ukude noxhumano lwe-Intanethi.
Sithanda ukunaka ingxoxo yevidiyo edume kakhulu, evakashelwa kakhulu ye-Russian Internet - ingxoxo ye-roulette. Isikhathi esichithwe kamnandi, nensizakalo esezingeni eliphakeme yesiza, sizokuvumela ukuthi uzizwe ungumuntu othandekayo kakhulu, odingekayo emhlabeni. Abantu ojwayelene nabo bazojabula ukukubona futhi ekusakazweni kwevidiyo, mathupha. Ungalahli izinyathelo zokuphepha ekhanda lakho. Ungathembi abantu ongabazi. Ngokuqondene nensizakalo, siyajabula ukukubona futhi sikusize uxazulule noma iyiphi inkinga maqondana nokusebenza kwensizakalo.
Ukuze ugweme ukwehluleka kokuqalisa okungathandeki kobukhona bezinhlobo ngezinhloso ezimbi - ukuqala ukuxhumana, ngaphambi kokusebenzisa ingxoxo yevidiyo - bhalisa kalula. Ngeke kuthathe isikhathi esiningi, ungakhathazeki. Ngokuphambene nalokho, kuzokwenza lula inqubo yokuphola nokuxhumana. Ungakukholwa - bese uqhubekela ekwakhiweni manje ukuze uqiniseke.
Izici nokuhlukahluka okusebenzayo kwengxoxo
I-roulette yengxoxo yevidiyo - induduzo nokuthintana okulula ubuncane bezenzo zabantu abakhuluma kuyo. Unekhono lokubhala imiyalezo, kuyabathokozisa abalandeli bezenhlalo. amanethiwekhi noma izincwadi ze-ICQ ne-Skype. Ngokuyinhloko, abantu abaningi babheka enye into engeyona engabalulekile - ithuba elilula lokugcina umlando womlayezo. Ngemuva kokungabikho isikhathi eside - "udlula" umbhalo wengxoxo bese ukhumbula lokho okhulume ngakho okokugcina ngombhalisi othile.
Kulabo abathanda ukuxoxa, kungenzeka ukuthi baxhume imakrofoni. Indlela yengxoxo ivame ukunconywa amantombazane. Bathanda "ukuwela ezindlebeni zabo" - futhi ngicabanga ukuthi lezi akuyona izindaba. Ingxoxo emnandi iyisikhathi esichithwe ngokukhazimulayo futhi esinenzuzo. Lokhu kuzoletha ukuphola kwe-inthanethi okubonakala kujwayelekile njengoba kusondele ngangokunokwenzeka kakhulu. Ilungelo lokubona umuntu okhuluma naye liyinzuzo enkulu, kepha empeleni akubizi lutho ngaphandle kwezwi, ukuzwakala kuleso sikrini esiyindida ... Ukuzwa iphimbo, ulwazimagama lolimi kanye nezwi lezwi - ungathola kangcono, uqonde umlingiswa, qagela imicabango.
Ochwepheshe bazamile ukukhuphula izici zokusebenza zensiza ezingeni elifanele, ukwenza ukujwayela okungahleliwe ngokungeza umsebenzisi ohlwini lwabangane (uma ngabe ubenalo uhlobo oluthile lokuzwelana nalowo okhulumisana naye futhi wezwa isifiso sokuqhuba inkhulumomphendvulwano kaninginingi noma umane angifuni ukulahlekelwa ukuxhumana nomuntu) Kulokhu, kuyisisekelo ukuthola ukuthi obhalisile uzophinde axhumane nini ukuze aqhubeke nokuxhumana naye. Ngokufanayo, njengamaphrojekthi wezenhlalo - sinethuba lokushintshana ngezipho. Okudingekayo ukuthenga izinhlamvu zemali ezibonakalayo. Ukuveza uthando ngale ndlela isenzo esiphakeme kunazo zonke, endaweni encane. Akuwona wonke umuntu onganikela ngesipho kumakhasimende wengxoxo yevidiyo, ngoba akuwona wonke umuntu okwaziyo ukuphana, futhi lelo lungelo lijabulisa lowo onikezwe lesi sipho. Ubuqotho bemizwasiyakuhalalisela ngomcimbi obalulekile noma nje ukwenza umuntu akhululeke ngawe.
Umlayezo wevidiyo orekhodwe kungosi uzoba indlela engajwayelekile. Lolu uhlobo lwe-avatar yevidiyo lapho uzethula khona, utshele okuncane ngawe, uthakazelise umbukeli we- "avator video". Veza imizwa yakho, unganqikazi ukutshela ikhamera ngobuhle nobubi bakho, ngezidingo ezifunwayo okufanele zibe kumlingani wakho wempilo yangomuso. Noma vele uzibonakalise.
Ukuveza ukwaneliseka kwakho - chofoza esibonakalayo sesikrini "yenza ukuncoma" - uzokhuthaza isitha sakho. Ngakho-ke, uzokhombisa ukwamukelwa, uzokwazi ukukhombisa induduzo nozwela, okufanele, ngokushesha, kubangele impendulo. Lesi senzo singakhonjiswa kunoma yiliphi icala elifanele: umcabango ovezwe ngokuhlekisayo, isithombe esikhonjiswe ngekhono, noma yisiphi isenzo esithakazelisayo esishaye ngomqondo okhazimulayo wegama elithi "ukuwa."
Ungakhohlwa ukuthi uyakwazi ukuveza okungekuhle. Uma ukwephula okungavumelekile, okungenakuthethelelwa, nokucacile kwemihlahlandlela yengxoxo yevidiyo kubonakala - fayela isikhalazo nganoma yisiphi isikhathi. Ngaphezu kweqiniso lokuthi umngeneleli uzokuqonda ukuthi banephutha, sizophinda futhi sithole isikhalazo futhi nakanjani sizosicubungula bese sithatha izinyathelo ngokushesha. Sizoluthokozela usizo lwakho ekulweni nabaphula umthetho, ngakho-ke sizoyivikela ingxoxo yevidiyo kubahlanganyeli ababi abangazihloniphi nohlaka olusunguliwe, futhi ikakhulukazi - bakucasula njengomuntu.
Ekuqaleni (sekushiwo ngenhla) - kwaphakanyiswa ukuthi kubhaliswe. Umsebenzi ukuqhamuka nokubhala emkhakheni ocacisiwe "isidlaliso" - igama engxoxweni, abangabona ngalo. Akudingekile ukubhala igama lakho nesibongo sakho - kwanele ukuqhamuka negama elihlekisayo, igama osunesikhathi eside uliphupha, isidlaliso sesilwane osithandayo - ngokujwayelekile, esifundekayo. Futhi isidlaliso sokuqala nesingasoze silibaleke siyisiqinisekiso sokuthi ngeke ukhohlwe futhi utholakale ngemuva kwesikhathi. Esizeni - ungaziwa ngokuphelele futhi ungakhathazeki ku-roulette yengxoxo yevidiyo.
Awukuthandi ukubukeka kwesixhumi esibonakalayo? Uzibekela ngokuzimela izilungiselelo zokubonisa kwangaphandle, i-color gamut, khetha leyo mibala ejabulisayo, engaphazamisi. Ulimi nokuboniswa kwalo kungasethwa ngokuthanda kwabo, basebenzisa isiRashiya, kepha ukukhetha kusezandleni zakho, njengoba besho. Ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo engahleliwe kuzoletha injabulo enkulu, inqobo nje uma usesimweni esifiselekayo futhi esinethezekile!
Uhlelo lwengxoxo yevidiyo yeRoulette
Umbandela obalulekile wokuhlola noma yiluphi uhlelo noma iphrojekthi ikhwalithi yokuklama nokubhala kwabo. Ngamanye amagama, ukuphathwa okulula kakhulu kohlelo, kuyadingeka ukuthi lusetshenziselwe kahle ngangokunokwenzeka. Futhi ungakhohlwa ukuthi amakhasimende avakashela insiza - udinga ukweqa izinkinga nokwehluleka okwenzekayo, kungcono kakhulu ukuvimbela ukwenzeka kwazo. Ngokuqondile i-roulette yethu yengxoxo yevidiyo ivikeleke ngokuphelele ngesoftware yesimanje kakhulu yokulwa negciwane, engeke ivumele ukugenca uhlelo lwethu. Ukubhaliswa okuyimpoqo - abantu abathandabuzayo abanemicabango emibi - kuyenyanyeka nje. Abakhombisi isifiso sokumoshwa futhi bashiye ikhasi, ngaleyo ndlela bashiye ingxoxo yevidiyo ukuze bathole "inzuzo" elula. 99% ukuze ukwazi ukuphumula endaweni ephephile futhi uzinikele ekutholeni okuhle. Ukungaxhumeki kalulaukuphola nemizwa ephelele - lokhu kuyikhambi lesizungu esinikeza izivakashi zethu.
Lapho kudluliswa inqubo, izivakashi ziqinisekisa isivumelwano sazo nemithetho yomsebenzisi. Uma uvumelana nesivumelwano, kusho ukuthi uyavuma ukuziphatha ngendlela enesizotha nokuziphendulela ngezenzo zakho, ube ocabangelayo ngokuhambisana nayo yonke imigomo yokuziphatha. Ngasohlangothini lwethu - siqinisekisa imfihlo yolwazi olucacisayo. Kungumsebenzi wethu futhi ukuqinisekisa induduzo yengxoxo yethu yevidiyo.
Amathiphu avela ku-Videoruletka.in.ua: Ungaba kanjani nentshisekelo kwabanye.
Sifuna ukujabulisa abantu abasizungezile. "Izonikani?" - othile uzobuza. Impendulo ilula: kuzosiza ekutholeni umsebenzi, thola abalingiswa abamangalisayo abazoba abantu obajwayele nabangane ngenxa yezingxoxo; akekho umuntu ovikelekile "ekushayeni ngamandla" enhlizweni, ngoba isigamu sesibili sizohlangana nathi - yebo, sekuvele kube nezimo ezinjalo, sizochaza izindaba ezimbalwa ngezansi - ukukhombisa izibonelo zempilo. Phatha ingxoxo kahle, zama ukulalela futhi "ukuzwa", ukumamatheka futhi uphendule ngomusa kulowo osikhulumelayo. Maye, akuzona zonke izifundo eziziphatha kahle ezimweni ezinjalo ... yini okufanele uyenze? Ungakujabulisa kanjani? Impendulo: ukuzijayeza nokwenza okuningi!
Uzoqonda ukuthi uveza nini umbono noma, kunalokho, uthule.
1) Umbono onamahloni, inkulumo ethule futhi emfushane ... ucabangani - lokhu kuzothakazelisa ubuso ngakolunye uhlangothi lwesikrini? Ingabe kuyaqashelwa? - "Incomo": ukuqala ukuzijwayeza ukukhuluma, ukubiza amagama nezwi. Khumbula: udinga ukuzwakala! Akufanele wesabe, zama ukuya emidansweni, i-karaoke - nikeza umphefumulo wakho inkululeko! Ngakho-ke uzothola ukuzethemba futhi ukhululwe.
2) Ngokuphambene nalokho, uyakhuluma kakhulu? Ingabe abantu obajwayele bahlambalaza noma bagweme abangane? "Amagama okuhlukana": Yima isikhashana ezingxoxweni, funda ukuba nentshisekelo ezenzakalweni zabagibeli. Lalela, buza imibuzo - ngaleyo ndlela ubenze bakhulume. Abantu abaseduze kwakho babizelwe ukuthi baqonde ukuthi unentshisekelo futhi awunandaba nabo. Abathandi ukutshela okuthile, hhayi ukulalela. Uma kungathathwa izinyathelo - umlaleli kuphela ozoba ... Yebo - wena uqobo.
3) "Imiyalo" - ukuxilongwa emhlabeni ... Uma kunesizathu noma ngaphandle kwesizathu - kukhombisa. Ngikholwe - iningi "liyacasula". Wonke umuntu unekhanda lakhe futhi nje akazisabalalisi izeluleko. Awuqapheli, kepha ulala ngezeluleko eziyigugu. "Isiphakamiso": Setha umgomo: uma ululeka othile, lapho kuphela lapho kudingeka, uma umphikisi ngokwakhe ebuza. Ngakho-ke bazokwazisa - ngazo zonke izindlela!
4) Uyenehaba noma ungayihlobisa inkulumo yakho? Ungaba nomona ngengcebo yemicabango? Cabanga, ukwenza kulo moya, kungekudala uzobhekana nokungakholwa. "Incomo": Ungazami ukudukisa okhulumayo. Gcizelela ukuthi lena inganekwane, ihlaya nje. Kepha uma le ndlela yokuqhuba ingxoxo "ikumunca" - ngaphandle kokukuqaphela, uzoba yihlaya. Ngokwemvelo, lokhu kuzoba nesithukuthezi - zama ukukhipha ifantasy ecacile kancane kancane futhi uqonde ukuthi kufanele uncokole nini, lapho kungcono ukuyeka ubuhlakani.
Ingxoxo yevidiyo yamahhala yaseRussia - itholakala kuwo wonke umuntu
Siyaqiniseka ukuthi cishe akekho owacabanga ngezindleko zokugcina iseva neminye imishini lapho ulanda isoftware. Ngifuna izingxoxo zevidiyo zingabakhokhisi. Kepha ake ucabange - abantu abayizigidi baxhumana ngomthombo, bazosebenza ngaphandle kokuphazamiseka, ngekhwalithi ephezulu. Inzuzo enkulu yengxoxo yevidiyo yinkululeko yokusebenzisa, esiyinikeza ngokuyisisekelo. Kunezingosi eziningi zokuphola, zonke izinhlobo zezingxoxo, izinkundla, kepha kufanele ukhokhe. Isibonelo, ukudlulisa imali ngokukhokha ngogesi noma ngokuthumela i-SMS, kepha noma ngabe ubukeka kanjani, lokhu kuyiqiniso. Manje ake sicabangele ukunikezwa kwethu - unikezwa ingxoxo yevidiyo yanamuhla yamahhala yekhwalithi ephezulu! Awudingi ukukhokha nganoma yisiphi isikhathi sakho. Ukuzilibazisa okuhlekisayo, okuhambisana nokufana, ngaphandle kokutshalwa kwezimali.
Kutholwe ukuqashelwa okusabalale kwi-Intanethi. I-roulette yengxoxo yevidiyo yethula imisebenzi, ithuthukise uhlelo - ukuze kube lula. Isisetshenziswa sidingeka nsuku zonke ngabahlali benani elikhulu lamazwe (esewonke, amanani angaphezu kwesigidi esingu-1)! Inani labantu ababhalisiwe lenyuka nsuku zonke. Uma uhamba nsuku zonke, ungahlangana nobuso obusha nobusha! Uzohlangana nabantu abanomqondo ofanayo abakusekelayo nombono wakho; kufanele uxoxe nabo ngezindaba ezijabulisayo neziphikisanayo. Siyini isihloko sengxoxo yevidiyo? Yebo, hhayi noma iyiphi! Ukuthola izihloko ezahlukahlukene ukuhlanganisa. Ayikho imikhawulo kubungako bemiyalezo ebhaliwe kanye nokuqondiswa kwe-lexical, ayikho ikhodi yokugqoka noma okunye ukuhleleka okudingekayo. Khululeka futhi ube ngokwakho, hlangana futhi ujabule. Isincomo sethu kuwe ukufunda nokubhala. Ukukhuluma ngendlela efanayo naseqinisweni, imithetho yezingxoxo ezihloniphekile ziyefana yonke indawo:i-erudition, imfundo, inkulumo ehanjiswe kahle - yilokho okwaziswa ngaphezu kwakho konke. Njengoba usuzibonise njengomuntu ovelele futhi ovelele, ziveze njengesidalwa esiqotho futhi esivulelekile, ukwenza kucace ukuthi awuyisicefe ukukhuluma naye. Nweba umbuthano wengxoxo yakho yevidiyo. Kepha into esemqoka ihlala - hhayi ukuzenza uhlobo oluhlukile, ube nguwe.
Usebenzisa ingxoxo yevidiyo, zizwe wena ekuqeqeshweni ngokunemba "kokuziphatha emphakathini". Eqinisweni, ungumuntu onamahloni futhi uyangabaza ukuzibonakalisa, usujwayele vele. Uma usebenzisa isayithi lethu nokutholakala kwalo ngokugcwele, ungaziqeqesha kalula ngamakhono wokuphola, uqonde umgomo wokuziphatha nabantu abangaziwa. Okuhlangenwe nakho okungenakubuyiselwa emuva kuzosebenza njenge "sifundo" esimnandi kubantu obajwayele. Ngokwengqondo uzobe usukulungele ukubhekana nobunzima osunqobe ezingeni lokuziphatha - ngeke zibe khona izithiyo. Ukuzilolonga kuhle kumuntu. Futhi ngeke kube inqubo yokufunda kuphela, kepha futhi kuzoba mnandi ukuchitha isikhathi sokuphumula enkampanini emnandi. Ukuxoxa nabantu abalungile kuzokukwenza uzizwe ujabulile, kumnandi, nezinzuzo zokuxhumana. Ukukhuluma engxoxweni yevidiyo - uzoba nethuba lokuphunyuka ezinkingeni zansuku zonke,osekuvele kuyisicefe.
Ukuxhumana nge-inthanethi kunikeza ithuba lokuziveza, ngokuphelele ngokuphelele. Indaba emayelana nawe nokuphila okuthakazelisayo - izolahla ihange lesizungu emphefumulweni. Noma iyiphi indaba - izolalelwa ngentshisekelo, bese uyixoxela abalingiswa abavuselelwe - uzobona ukubukeka okuphefumulelwe njalo. Yabelana ngenkinga yakho, cela ukuholwa, cela ukwesekwa kokuziphatha - futhi uzozwa imfudumalo enobungane (uma uthemba, kunjalo). Kungcono "ukuthulula umphefumulo" kumlingiswa ongazijwayele, ekubeni ukude - okuyinto enhle. Awukweleti muntu. Kepha ngicela ungakhohlwa ukuthi kukhona uhlaka oluthile lokuthembana. Noma kunjalo - awujwayele neze, noma kunjalo, ufuna ukumazi kahle.
Ukuhlangana "nomphefumulo" engxoxweni yevidiyo - inganekwane noma iqiniso?
Imvamisa kwenzeka kanjena: abantu bathola umlingani womphefumulo kumanethiwekhi e-elekthronikhi. Izibonelo eziningi, lapho okuthile kwavela ngempumelelo ku-Intanethi phakathi kwabasebenzisi, kwaphenduka imihlangano eseyikhona empeleni. Ubudlelwano obunjalo, njengokujwayelekile, ukuphela kwendlela: ukuqhubeka, ukuzibandakanya futhi ekugcineni - umshado. Imindeni engaphezu kwamakhulu ezinkulungwane emhlabeni ikhona ngenxa yobuchwepheshe obusha. Wonke umuntu angathandana esebenzisa isayithi lokuphola, iforamu noma ingxoxo yevidiyo njengezindlela ezithuthukisiwe. Uma kunesizungu, ungakuhlehlisi okufanele ukwenze kuze kube kusasa - kholwa emandleni akho, sondela ngokungathí sina ekufuneni umuntu ozohamba naye. Sizosiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo; ungasebenzisa ngokugcwele isiza sethu. I-roulette yengxoxo yenzelwe usuku olujwayelekile, ubusuku kanye nosesho (sishilo phambilini - kungaba nabantu abathanda okuhle, abangane).Lawa akuwona amagama nje, ngikholwe, konke kuyiqiniso! Ithuba lisethubeni elikhulu kakhulu! Ukuqala kwempilo entsha kanye nale oyithandayo akukhiywa ngaphandle - uzoba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo edume kakhulu yolimi lwesiRussia noma cha? Kungenzeka ukuthi isivakashi esinjalo sibe nesizungu njengawe esinqumayo emehlweni aso - ugcwalisa izinkambu zemibuzo, enethemba lokuhlangana nomoya wezihlobo, izinhlansi zizovela emehlweni akhe, kuzoba nencazelo eyengeziwe yothando ngokwakho umhlaba. Into esemqoka ukungazuliseli isandla sakho ngomusho osile: “lokhu akwenzeki” - uyazi? Hlola ikusasa lakho langempela. Cishe, njengoba wenze igxathu eliya phambili, ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu elihle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...Ukuqala kwempilo entsha kanye nale oyithandayo akukhiywa ngaphandle - uzoba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo edume kakhulu yolimi lwesiRussia noma cha? Kungenzeka ukuthi isivakashi esinjalo sibe nesizungu njengawe esinqumayo emehlweni aso - ugcwalisa izinkambu zemibuzo, enethemba lokuhlangana nomoya wezihlobo, izinhlansi zizovela emehlweni akhe, kuzoba nencazelo eyengeziwe yothando ngokwakho umhlaba. Into esemqoka ukungazuliseli isandla sakho ngomusho osile: “lokhu akwenzeki” - uyazi? Hlola ikusasa lakho langempela. Cishe, njengoba wenze igxathu eliya phambili, ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu elihle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...Ukuqala kwempilo entsha kanye nale oyithandayo akukhiywa ngaphandle - uzoba ngumsebenzisi wengxoxo yevidiyo edume kakhulu yolimi lwesiRussia noma cha? Kungenzeka ukuthi isivakashi esinjalo sibe nesizungu njengawe esinqumayo emehlweni aso - ugcwalisa izinkambu zemibuzo, enethemba lokuhlangana nomoya wezihlobo, izinhlansi zizovela emehlweni akhe, kuzoba nencazelo eyengeziwe yothando ngokwakho umhlaba. Into esemqoka ukungazuliseli isandla sakho ngomusho osile: “lokhu akwenzeki” - uyazi? Hlola ikusasa lakho langempela. Cishe, njengoba wenze igxathu eliya phambili, ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu elihle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...ukuthi isivakashi esinjalo sinesizungu njengawe esinqumayo emehlweni aso - sigcwalisa izinkambu zohlu lwemibuzo, ngethemba lokuhlangana nomoya wezihlobo, izinhlansi zizovela emehlweni akhe, kuzoba nencazelo eyengeziwe yokuzithanda umhlaba. Into esemqoka ukungazuliseli isandla sakho ngomusho osile: “lokhu akwenzeki” - uyazi? Hlola ikusasa lakho langempela. Cishe, njengoba wenze igxathu eliya phambili, ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu elihle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...ukuthi isivakashi esinjalo sinesizungu njengawe esinqumayo emehlweni aso - sigcwalisa izinkambu zohlu lwemibuzo, ngethemba lokuhlangana nomoya wezihlobo, izinhlansi zizovela emehlweni akhe, kuzoba nencazelo eyengeziwe yokuzithanda umhlaba. Into esemqoka ukungazuliseli isandla sakho ngomusho osile: “lokhu akwenzeki” - uyazi? Hlola ikusasa lakho langempela. Cishe, njengoba wenze igxathu eliya phambili, ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu elihle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu eliziphethe kahle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...ikusasa lizokuza kuwe futhi neqembu eliziphethe kahle lephrojekthi yethu lizokhuphula ingilazi yewayini elimhlophe, elimnandi, elikhazimulayo lempilo enhle, inhlalakahle yomndeni ...
I-roulette yengxoxo yevidiyo iyindawo yokuxhumana okuhle
Ukuchitha isikhathi sokuzilibazisa ngale ndlela ngemuva kosuku olunzima olugcwele imizwa kungcono kunokubheka ophahleni oluhle olunwebekayo ungazi ukuthi wenzeni ngenkathi uyisicefe. Unethuba elihle lokuhlangana nabantu abahle, abahle ngaphandle kokushiya indlu yakho. Isimo esibi, esesabekayo, awunawo nhlobo amandla okuhamba ngaphandle, kepha umphefumulo udinga ukuwuvumela ushelele, uphumule ... izinketho ezilingayo - kungaba ukulala noma ukuvula iwebhusayithi yethu ngokuchofoza kabili kwegundane. Xhumana, yenza abangane abasha, into esemqoka ukuthi ungahlali ngeze ngaphakathi kwezindonga ezine, uchitha isikhathi sakho ku-tube TV, oyibuka njalo ngomzuzu wamahhala. Kuzoba kuhle futhi kujabulise cishe kusukela ekuqaleni - uzobona ukubukeka kwabangane abavela ngaphandle. Bazocabanga ukuthi bayathandana noma ushintsho olukhulukepha akekho ongasho ukuthi bamane bacwiliswe kwi-Intanethi. Eminyakeni embalwa edlule - Awuzange ucabange ngokuthola ukuhlangana. Ungakwenza kanjani ukuxhumana nabantu bakwamanye amazwe ngamakhulu ezinkulungwane zamakhilomitha, ngenkathi ubonana? Ngaphandle kokushiya indlu yakho - ungajabulela isikhathi sakho usebenzisa ingxoxo yevidiyo engahleliwe.
Ngendlela, angikhumbuli ukuthi ngabe sithathe isinqumo sokugxila kule ndlela. Awushiyi ikhaya lakho. Singancoma ukuxoxa ngevidiyo ngokuzethemba, ukunakekela nokuphikelela! Azikho ezinye izindleko ezitholakalayo zomgwaqo noma imali ekhokhwayo, ubuncane besikhathi, amandla, amandla - ezandleni zakho. Ngemuva kokuzivocavoca, usukhathele ukungayi ndawo, kepha endaweni yakho, lapho amafomu amahle, amahle, athandekayo ezoheha abantu ngakolunye uhlangothi lwesikrini - usuyabona vele, akunjalo? Umngeneli uzothanda indlela umngane owakhiwe kahle amomotheka ngayo kukhamera. Akekho ozobona ukuthi uyaxhuga ngomlenze owodwa, noma ukuthi udonse umsipha ... Awuphuzanga ikhofi. Ithempelesha? Kunzima ukuqagela. Akekho ozokwazi ukuthelela. Eqinisweni, lokhu kungukuthuthuka emhlabeni! Hlangana futhi ujabule ngobuhlanya!
Ingxoxo yevidiyo engahleliwe yaseRussia evela konjiniyela abanolwazi
Isayithi lapho ukhona manje lakhiwa yiVideoruletka, futhi isicelo siyimpahla efakwe yiBadanga Limited., Ucingo. +66865819983. Le femu enkulu inabasebenzi abanolwazi, abaqeqeshiwe emkhakheni wezobuchwepheshe be-Intanethi kanye nesoftware (ehunyushwe isuselwa olimini lohlelo: isoftware). Inani langempela lenziwe ngabasebenzi, ulwazi, ulwazi lwebhizinisi labo - ungashiyi ungenandaba nomsebenzi wabo owenziwe. Ngenxa yokusebenza kanzima, imizamo - namuhla singajabulela ukusebenza kwekhwalithi ephezulu yohlelo lokusebenza: i-videochat. Isifiso sokwenza ngcono ukuthengwa kwamakhasimende sizobonwa noma kunjalo. Umsebenzi wenziwa nsuku zonke, izinguquko ziyabonakala njalo ezinyangeni eziyi-2-3. Uma, lapho ukhetha izigaba zokuzijabulisa, amehlo akho awela engxoxweni yethu yevidiyo, khona-ke uyayiqonda insizakalo esezingeni eliphakeme, ukusebenziseka kalula.Umsebenzi wethu unikeza isiqinisekiso sokuthi uzosebenzisa kuphela izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ukuqapha uhlelo olusebenza kahle kakhulu lwesiza kanye nenzuzo ebonakalayo. IVideoruletka - obakhathalelayo isithombe sabo kanye nokuvela kwezivakashi zabo. Qiniseka ukuthi usebenzisa amasevisi ekhwalithi aqinisekisiwe kuphela kusuka konjiniyela abathembekile abathobela isivumelwano somsebenzisi.ukuthobela isivumelwano somsebenzisi.ukuthobela isivumelwano somsebenzisi.
Kusetshenziswa ingxoxo yevidiyo ne-roulette uma ungaphansi kweminyaka engu-13.
Uneminyaka engu-18 ubudala? Lapho-ke, uma abazali bakho noma ababheki bakunikeza imvume, unga
hlala kusayithi lethu.
Ukudluliswa kokuqukethwe okungekho emthethweni akuvunyelwe.
I-chat roulette KuMit - ukuphola amantombazane nge-webcam
Ngabe ufuna indlela esheshayo yokuhlangana nentombazane ehlakaniphile nenhle? I-Web chat roulette CoMeet (inguqulo yesiNgisi yeCooMeet) ikuvumela ukuthi uxhumane nabesifazane abavela emazweni ahlukene ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Ukuxhumeka okusheshayo, ikhwalithi ephezulu yekhwalithi yokushaya kwevidiyo, akukho ukucindezeleka futhi kuphela abaxhumanisi abahamba phambili abazohlala behlangana ngokumomotheka.
Siyazi ukuthi isikhathi esibaluleke kangakanani namuhla: siphoqeleka njalo ukubeka phambili, ukusindisa nokujaha, kepha asinaso isikhathi sokwenza konke ebesikuhlelile. Kulesi siphithiphithi, ukuphola nobudlelwano kuvame ukubuyela emuva. Iwebhusayithi esemthethweni yaseKumit iqinisekisa ukuxhumana kwekhwalithi ephezulu kuphela namantombazane afakazelwe - imihlangano eku-inthanethi, abantu obajwayele kanye nomoya omuhle.
Ukuchofoza okukodwa kanye nohlelo lwethu oluhambisanayo oluhlakaniphile luzokuxhumanisa nesinye sezinkulungwane zezihambi ezingathandekayo. Qiniseka ukuthi wonke amantombazane eza lapha ukuhlangana, ukuxhumana nokwakha ubudlelwano. Ayikho enye insiza yamahhala enganikeza ngezinga eliphezulu lenkonzo njengengxoxo ye-QMIT:
ukuvivinya ngesandla kwentombazane ngayinye ebhalisiwe;
ukulungiswa ngokushesha kwanoma yiziphi izimo eziphikisanayo;
unswinyo olufanele ngakho konke ukwephula imithetho yengxoxo ye-roulette;
ukuthuthukiswa okuqhubekayo nokwenza ngcono ukusebenza kwesayithi.
I-Omegle ne-ChatRoulette ehlukile kakhulu
Wonke umuntu owayenesithakazelo kuma-roulettes aku-inthanethi mhlawumbe uyazikhumbula lezo zingxoxo ezazimi emsukeni wokuxhumana okungahleliwe. Lawa kwakungu-Omegl noChatRulet, avele emuva ngo-2009. Owokuqala weza kithi evela phesheya, owesibili kungumqondo womfundi wesikole waseRussia u-Andrey Ternovsky.
Womabili la ma-webchats abesekelwe kumgomo ofanayo: ukuxhumana nabangeneleli abangahleliwe abavela kuwo wonke umhlaba. Futhi yize u-Omegle aqale ikhanda izinyanga ezimbalwa, bekuyi-ChatRoulette ebuse umbukiso isikhathi eside. Kodwa-ke, zombili izingxoxo ezingahleliwe zigcine zibhekane "nesifo" esifanayo, okusese kuyinkinga futhi kudikibalisa abaningi ukuzisebenzisa.
Lokhu, yiqiniso, okuqukethwe okungalungile. Ezweni elihle, abantu abaqondile nabanobungane kufanele bangene kwi-video roulette, abafuna ukuhlangana, ukuxhumana, nokunikezana imizwa emnandi. Empeleni:
imvamisa uzithola kubabukisi abafuna ukukhombisa ukufaneleka kwabo ngokomzimba kumuntu osebenzisana naye;
intombazane enhle ingaba ngummeleli womsebenzi wasendulo ohlinzeka ngezinsizakalo ezisondelene;
ukuxhumana okulandelayo kuzonikeza ithuba lokujabulela isithombe noma ividiyo emile enokuqukethwe kokukhangisa. Yebo, abantu be-PR abakwazi ukuyiphika inganekwane.
Ngemuva kwalokho kwaba sobala impela ukuthi sidinga enye indlela ehloniphekile - ingxoxo yevidiyo engahleliwe, engena lapho ungakhathazeki ngokuthi ngubani ozoba ngakolunye uhlangothi kwesikrini. Futhi ophambili phakathi kwezingxoxo zevidiyo eziguqukile nguKumit.
Kube ukulinganiswa kwabahlanganyeli nezinyathelo ezifike ngesikhathi ezithathiwe zokwephulwa ngakunye ezaba yisixazululo senkinga ebuhlungu yezinsizakalo ezifanayo. Zisuka nje, sabona ngokusobala ukuthi akunakwenzeka ukubheka ukuzenzakalela okuphelele kwale nqubo - sidinga insizakalo yabantu esezingeni eliphakeme ukuze abasebenzisi baqonde izinzuzo nezinzuzo zesiza abasisebenzisayo. Futhi imizamo ikhokhelwe.
Namuhla - iKumit ingenye yezingxoxo zewebhu ezisezingeni eliphakeme futhi eziphephe kakhulu ezingahleliwe. Futhi noma ngubani angaqiniseka ngalokhu. Vele uchofoze u- "Start Search" bese uzama i-roulette eku-inthanethi namantombazane ngokwakho.
Amantombazane amahle kakhulu aseRussia - okukodwa kude nawe
Ukuthola uthando nokwakha ubudlelwano kube lula kakhulu selokhu izinsizakalo zokuphola zaqala ukuthuthuka online. Futhi i-roulette yengxoxo isiphenduke ithuluzi elihle lale nhloso, ukujoyina ukuxhumana nomphakathi namasayithi wokuphola. Kepha ngokungafani nababili bokugcina, kungxoxo yevidiyo lapho ungabona khona amehlo okhulumisana omuhle, ukumamatheka kwakhe futhi uzwe imizwa engachazeki yobudlelwane obusondelene nasebangeni lamakhulu amakhilomitha.
Usangabaza? Xhuma mahhala futhi uqale ukuxoxa namantombazane engxoxweni yethu yevidiyo engahleliwe okwamanje ngaphandle kokubhalisa nokugcwalisa iphrofayili. Udinga kuphela ikhamera yewebhu ukuqala ingxoxo yevidiyo ye-QMIT. Futhi uma ngokungazelelwe i-interlocutor ingekho ukunambitheka kwakho - shintshela kumuntu omusha ongamazi ngokucindezela inkinobho eyodwa. Amantombazane avela emhlabeni wonke asevele elinde wena!